Momba anay - Vondron'orinasa Huaihai Holding
Ny Huaihai International Development Corporation dia ao amin'ny zaridaina fampandrosoana ara-toekarena sy teknolojia Xuzhou (ambaratonga nasionaly) Huaihai Zongshen Industrial Park.
Huaihai Holding Group, teraka tamin'ny 1976, dia nanolo-tena amin'ny fikarohana teknolojia sy fandrosoana, serivisy fanamboarana fiara ary serivisy amin'ny sehatry ny fiara kely sy fiara vaovao angovo mandritra ny 40 taona, miaraka amina orinasa lehibe manarona fiara kely, fiara auto, kojakoja Core. , Orinasa any ivelany ary famatsiam-bola maoderina. Mihazona marika lehibe 3 an'i Huaihai, Zongshen ary Hoann, Huaihai Holding Group dia mitantana ny orinasa 27 manontolo sy orinasa mpamokatra trano any Xuzhou, Chongqing ary toerana hafa, ary koa toby any ivelany any Pakistan, India, Chile, Peru, ary Indonesia. Nihoatra ny 10 miliara RMB ny sandan'ny vondrona sy ny raharaham-barotra, ka anisan'ireo Top 500 an'ny orinasa manokana Shinoa sy orinasa ambony 100 any Jiangsu Province. Ahitana firenena sy faritra 85 eran'izao tontolo izao ny tamba-jotra marketing. Ny haavon'ny varotra amin'ny tsena dia laharana faha-1 ao amin'ny indostria nandritra ny 13 taona nifanesy, No.1 tao amin'ny fanondranana fiara kely ary ny 1 ao amin'ny indostrian'ny fiara lozika. Hatramin'ny faran'ny taona 2019 dia nahatratra 20 tapitrisa unit ny famokarana vokarina sy ny famarotana fiara vitsy kely izay manamarika ny tenany ho mpitana firaketana Guinness manerantany ary mpitarika manerantany amin'ny fiara kely.
Topin'ny orinasa tsy miankina shinoa 500
Orinasa 100 lehibe indrindra ao amin'ny faritany Jiangsu
Orinasa ambony indrindra 3 mpamory haba ao Xuzhou City
Huaihai Holding Group dia orinasa tsara amin'ny indostrian'ny mekanika sinoa, orinasa mandrindra maoderina amin'ny indostrian'ny sinoa, orinasa orinasa mahay manamboatra tena, orinasa ambaratonga vaovao sy teknolojia ara-teknika ao amin'ny faritany Jiangsu, mpandresy amin'ny Jiangsu Quality Award, tsara Orinasa tsy miankina amin'ny faritany Jiangsu; izany dia ao anatin'ny laharana 100 an'ny orinasa Sinoa manokana, 100 100 ny Jiangsu Merchants, ambony orinasa 3 any Xuzhou, orinasa ambony 3 mpandoa hetra ao Xuzhou.
Ny fenitra nasionaly
Ny fenitra iraisam-pirenena
Ny orinasa dia nandalo ny fanamarinana rafitra momba ny kalitao momba ny kalitao ISO9001, fanamarinana rafitra ara-tontolo iainana ISO14000, fanamarinana rafitra ara-pahasalamana momba ny fahasalamana & fiarovana, OHSAS18001, fanamarinana ny vokatra vita amin'ny firenena 3C, fanamafisana ny sehatry ny ambaratonga nasionaly ary ny fanamafisana ny fenitra iraisam-pirenena fanamafisana ny vokatra iraisampirenena.